भक्तपुर नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ अर्व १३ करोड बजेट विनियेजित - VOICE OF NEPAL
१० असार २०७६, मंगलवार ११:४५ 107 ??? ???????
-राम गोपाल तमखु
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७को लागि २ अर्व १३ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाको पाँचौै नगरसभामा उपप्रमुख रजनी जोशी अनुमानित बजेट पेश गर्दै आगामी आर्थिक बर्षका लागि बाह्य स्रोतबाट १ अर्ब २२ करोड ४० लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै आन्तरिक तर्फ ६२ करोड रुपैया आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि चालु र पुँजीगत गरी जम्मा २ अर्व १३ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालू तर्फ ९९ करोड ८० लाख र पुँजीगत तर्फ १ अर्व १३ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कुलवजेटको चालु खर्च तर्फ ४६.८३ प्रतिशत र पूजीगत खर्च तर्फ ५३.१७ प्रतिशत वजेत विनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाले सवै भन्दा बढी सम्पदा संरक्षण तथा विकास निर्माणका लागि कुल बजेतको ३४.२१ प्रतिशत अर्थात ७२ करोड ९१ लाख १० हजार बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै शिक्षाका लागि कुल बजेतको १४.४२ प्रतिशत अर्थात ३० करोड ७३ लाख ९६ हजार र स्वास्थका लागि कुल वजेटको ११.९९ प्रतिशत अर्थात २५ करोड ५४ लाख ६२ हजार छुट्याएको छ । त्यसैगरि शैक्षिक ऋण कोषका लागि ४ करोड ९९ लाख ९० हजार, भक्तपुर महोत्सव गर्नका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि १३ करोड ५७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । भक्तपुर नगरपालिका फोहर व्यवस्थापनका लागि देशकै नमुना नगरपालिकाको रुप लिने गरिन्छ । नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन शूल्कमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा २५ करोड ९३ लाख ४४ हजार आम्दानी गरेको थियो भने आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ३० करोड रुपैया आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सम्पत्ति कर अन्तगर्तको घरजग्गामा लाग्ने कर घटाएको छ । घरजग्गाका मुल्यांकनको आधारमा गत बर्षको तुलनामा मूल्यांकनको आधारमा घटाइएको छ ।